Waxaa lagama maarmaan ah lagama maarmaan ah in si joogta ah loo casriyeeyo qalabka Android si aad u kordhiyo shaqeynta iyo waxqabadka. Tababaraha update Android freshens iyo hagaajinaysaa shaqeynta iyo waxqabadka qalab kasta oo Android labada by si joogto ah la xariirta ay hindiseen. Muuqaaladan ugu weyn ee tababare update Android waxaa ka mid ah baaritaanka deg deg ah oo ka mid ah qoraalkii ugu dambeeyey ee ROM aad jeceshahay iyo update dagdag ah oo ka mid ah barnaamijyadooda la heli karo.
Kuwa soo socda waa updates in dadka isticmaala Android sameeyo:
Versions OS Android.
Firmware Android: Tani wuxuu diyaariyaa dhibaatooyin sida cayayaanka, Marlon iyo dhibaatooyin kale oo laga yaabaa inaad ama ma laga yaabaa in ay ka war hayaan. Dhibaatooyinkaasi waxay mar walba marar badan ka dhaca sabab u ah is dhexgalka sii la OS ee Android oo waxaa ugu wanaagsan ee lagula talinayaa in ay si joogto ah u cusbooneysiin iyaga si ay u ilaaliyaan waxqabadka ugu fiican ee qalabka.
Android nidaamka / ROM: codsiga waxay u baahan helaan xididka si loo soo dajiyo ROMS sidoo kale aad ugu suurtogasho inay u isticmaalaan qalabka. Waxaa downloads updates ROM ee CyanogenMod, MIUI, AOKP ama ROMS kale kale sida bakhaar buuggan.
Chine Android: Waxaa jira barnaamijyadooda badan oo telefoon kasta Android oo app bixiyaha cusbooneysiin doonaa versions of barnaamijyadooda hadda ka dibna si aad u hesho waayo-aragnimo fiican oo Chine ka.
Qaybta 1aad: Sida loo Cusboonaysii Android Operating System Qeybta 2: Sida loo Cusboonaysii Android firmware Maamulaha Android Update App Qeybta 3: Sida loo Cusboonaysii ROM Android Maamulaha Android System Update Qeybta 4: Sida loo Cusboonaysii Android Apps Maamulaha Update App Android
Qaybta 1aad: Sida loo Cusboonaysii Android Operating System
Iyadoo technology deg deg sare, qaababka cusub lagu darin OS cusub Android, shaqeynta qalabka iyo waxqabadka ayaa si weyn u soo hagaagtay. Inta badan qalabka kugu wargelisaa helitaanka update ah, laakiin ay dib u soo gelin. Waxaad iska ilaalin kartaan tan la xariirta OS adigu adigoo raacaya tallaabooyinkan fudud.
1. Dib ugu xogta aad: Inkasta oo ay jiraan fursado caato ah oo laga badiyay xogta ama hartay socodka ah ee la xariirta aad OS Android, in aanad u dayicin. Si loo ilaaliyo khasaaraha xogta, si wax ku ool dib ilaa adigoo sax ku dhisay-in "kaabta iyo soo celinta" doorasho ama isticmaal mid ka mid ah qalab dibadda sida Wondershare MobileGo for Android in ay dib u dhan xogta ku saabsan qalab android si aad u computer ah.
2. Tag Settings: hYou helo karo Settings by siyoodba button menu shaashadda guriga iyo Settings dooro ah.
3. dheeraad ah u dhaadhacdaa "About phone / kiniin ah".
4. Tubada "update Software".
5. Waxaad tagtaa "pdate". Aaladaha kale waxaa laga yaabaa in "Hubi casriyeysan".
6. Tubada "Guuleysatey & Ku rakib". Qalab aad u baahan tahay in la bilaabi waayo, waxaa loo soo dajiyo update ah.
Qeybta 2: Sida loo Cusboonaysii Android firmware la Android Update Manager App
Waxaa jira firmwares kala duwan laga soo saarayaasha qalab kala duwan, tusaale ahaan "Galaxy firmware & Updates" waa codsi Tababaraha news update Android oo ah in u heellan in ay telefoonada gacanta Samsung.
Aynu qaadan Samsung casriga ah (S2, S3, S4) oo tusaale u ah in ay muujiyaan sida ay u cusboonaysiiyaan firmware. Hagaha waa sida soo socota:
1. Dooro "goobaha Phone" ka menu Settings ah, la aqoonsado iyo "Network / Sim Unlock" jaftaa. Waxa dalban doonaa model phone number. INSERT NUMBER model ah oo ka jaftaa "abuurto code Unlock". Waxaa si toos ah ay abuuri doonaan code Unlock sida hoos ku qoran.
2. Flash firmware ah
Tubada waxa weeye fallaadha kooxda tilmaanta xaq u leedahay in gacanta iftiimiyo firmware sida shaxanka hoose.
Afeef! Ka hor inta biligleynaya firmware ah, waa in aad ka war soo socda:
Sameyso sax ah oo dhan xog muhiim ah oo ku saabsan qalabka.
Dukaamada waa in uu inta lagu guda jiro ku amraya ama waxay leeyihiin ugu yaraan 85% awooda batariga.
3. Dooro qalab aad
Markaas, aad aragto "Select Device". Hoos arrow ilaa aad ka aragto qalab aad, ka dibna waxa ay doortaan. Tani waa in aad keeni updates Samsung.
4. Tubada "Latest Firmwares" si ay ugu dambeyntii u cusbooneysiin firmware telefoonka iyo dadajiso qaab qalab aad.
Qeybta 3: Sida loo Cusboonaysii Android ROM Maamulaha Update System Android
CUSBOONAYSIINTA ROM wuxuu noqon karaa xeelad ugu jeer, laakiin mar baad u addoonsada, waa amarkooda aan xanuun lahayn. Si aad u cusboonaysiiso ROM, halkan waa tilmaan:
1. screen guriga, hel Menu iyo waxa ka jaftaa
2. Tubada "Apps" icon. Iyada oo ku xidhan qalab aad, dhinac ama hoos mari si ay u helaan icon ee Chine oo ay doortaan. Hubi in qalab aad ku xiran shabakad Wi-Fi sida aad u sii wado.
3. Waxaad tagtaa "System updater pro" doorasho. Tani waxay ku tusi doonaa model ah qalab, xaaladda xidid, waxa aad la xariirta ah ee. Tubada "Download" doorasho hoose ee shaashadda.
4. Tubada "Ha ogolaan in khasnado" iyo "Ha ogolaan in Dalvik". Tani waxay u tirtiri doonaa files ku meel gaar ah oo looga fogaado khaladaadka iyo isku dhacyada in laga yaabo in ay dhacaan inta lagu jiro rakibo ROM. Tani waa in la sameeyaa, gaar ahaan marka aad soo dajiyo update weyn (tusaale Android 2.3 in 4.0)
5. Dooro "Abuur update.zip" by siyoodba. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad heshaan meesha aad ku qoysay / files ku meel gaar ah waxa lagu kaydin doonaa.
6. Dooro zip aad abuuray ka mid ah liiska hoos ku qoran. Qalabka wuxuu ku siinayaa liiska meelo badan oo aad si nabad ah ku hayn kartaa faylasha aad ee bakhaar
7. Select hadda rakib dhinaca midig ee shaashada si loo soo dajiyo update ROM ah.
Qeybta 4: Sida loo Cusboonaysii Android Apps Maamulaha Update App Android
Aad bay u fududahay inaad cusboonaysiiso barnaamijyadooda Android sida mararka qaarkood Apps kuu soo diri doonaa ogeysiin ah in ay jirto version cusub. Ama mararka qaarkood marka aad furto app ah, waxa aad weydiin doonaa update haddii waxa uu leeyahay version cusub. Just guji cusboonaynta, waxaad awoodi doontaa in la casriyeeyo. Halkan waa hage ah si ay u maareeyaan updates on Android in badan la Tababaraha update Android app - System Updater (ROM Download)
Tallaabada 1. Ku rakib Tababaraha update Android app ku saabsan telefoonka.
Tallaabada 2. Tababaraha update app Open Android.
Tallaabada 3. Tag Report Isticmaalka App .
Tallaabada 4. Tubada mid app iyo macluumaadka faahfaahsan oo lagu soo bandhigi doonaa.
Tallaabada 5. Dooro jeeg Update . Haddii ay jirto version cusub, guji Hagaaji .
3 Hababka in kaabta Android Photos
> Resource > Android > Manager Android Update: Hel Performance wanaagsan ee aad Android Phone